23 May, 2020 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Farmaajo oo Fahad yaasiin uyeerey ayaa wuxuu ku dhahay wixii lanagu xamanayey hada ayaya loo baahn yahay in adoo aad uga fekeraya Muqdisho laga sameeyo falal amni xumo ah .
Fahad yaasiin oo dhowla cadeynaya ayaa wuxuu yiri madaxweyne arinkaa adiga meel ka fadhiiso mar hore ayaa diyaariyey dhinackasta waana diyaar.
Ilwoo wareedyo ka agdhow labdaan masuul oo weliba ayaga si qoto dheer ula socda arimhaasi ayaa waxay inoo sheegeen in 27ka wiii ka dambeeyo hadii sida ay riyadooda tahay noqon weyso dad badan oo hada nool siyaasiyiin uubadan iyo shacab qaraxyo lala eegi doono.
Kulanka ayaa waxaa ku wehliyey labada masuul oo goor dambe imaadey Kulane Jiis ama Jiisi mariixaan , waxay sidoo kale ay ka wada hadleen sida Baalasha looga rifi lahaa Kheyre.
Howwshaan Fulinteeda ayaa markiid ambe waxa uu farmaajo codsadey in labadoodu aanu lagu helinw ax raad ah oo ay isticmaalan gacmo kale si wax kastoo dhaca aan ayagu far usoo galin waayo ayuu yiri gaal iyo muslin mucaarad oo dhan ayaa isha idinku haayo sidoo kale Taleefonadiiina ma ahan Kuwo 100% la isku haleyn karo .
Farmaajo oo dhowla cadeynaya islamrkaana qalbi baxsan ayaa dhabarka ka dharbaaxey kulane oo ay markii dambe isku sii hareen fahad yaasiin oo ay ka sheekeysteen fariin ay usoo direenn saaxiibadooda Qatar taas oo aan weli helin